Izindaba - Ungayiphatha kanjani imboni yokucubungula i-CNC kahle
Umkhakha wokucubungula we-CNC ngemuva kuka-2019, amabhizinisi amaningi aya ezwa ukuncipha kwama-oda emakethe. Ungayiphatha kanjani imboni yokucubungula i-CNC sekuyisihloko esikhathaza osomabhizinisi abaningi. I-Wally imishini ubuchwepheshe ibisebenza embonini yokucubungula ye-CNC iminyaka eminingi, futhi ibhekene nenkinga enjalo. Sizokwenzenjani?
Ngokuvamile, imboni yokucubungula i-CNC ingeyemboni eyisisekelo yokukhiqiza. Emehlweni abantu ababi, kungaba imboni yezinga eliphansi yokukhiqiza. Emehlweni abanethemba, kuyimboni enhle kakhulu yokukhiqiza eyisisekelo. Awukho umkhawulo wempilo yemakethe wemikhiqizo, futhi awukho umehluko phakathi kwenkathi yokuphuma nesikhathi sonyaka.
Ukuze usinde kangcono embonini yokucubungula i-CNC, into ebaluleke kakhulu ikhwalithi. Ikhwalithi kufanele ibe ngumugqa wokuphila wokuthuthukiswa kwebhizinisi. Amakhasimende amaningi embonini yezinsiza kusebenza kunzima ukuthuthukisa abahlinzeki bokucubungula abasezingeni eliphezulu be-CNC. Isizathu esiyisisekelo ukuthi ikhwalithi yemikhiqizo ayikho ezingeni, okuthinta kakhulu ukuhlangana nokulethwa kwamakhasimende. Ngakolunye uhlangothi, isebenza ku-CNC processing Ngakolunye uhlangothi, ngamakhasimende angakwazi ukuthola ama-processor we-CNC aphezulu.
Ungawenza kanjani umsebenzi omuhle ngekhwalithi yomkhiqizo, okokuqala, kufanele sinake amazinga, futhi sisebenzise amazinga asungulwe kahle. Ngesikhathi senqubo yokuqalisa, akumele kube nesaphulelo, njengamazinga wokudweba, amazinga wokusebenza, amazinga wokuhlola, njll. Konke ukuxhumana komkhiqizo kusuka ezintweni ezingavuthiwe kuya ekuthunyelweni kulawulwa ngokuqinile futhi kusetshenziswe ngokuya ngamazinga, ukuze kwenziwe okuhle inkambiso yamasiko ezinkampani, ikhwalithi izoba ngcono futhi ibe ngcono Kufanele kube khona imakethe.
Ohlelweni lwebhizinisi lwango-2019, i-volley imishini ubuchwepheshe ihlela ukwethula iziphetho eziphezulu zaseJapan zokugaya imishini yokucubungula imishini futhi, ikhulisa kakhulu amandla wokukhiqiza nokusebenzela kangcono amakhasimende amasha namadala.